Home Wararka Yaa ku Taliya Xeritaanka Wadooyinka Muqdishu, Adigaa Yaabi Doona. Akhriso
Yaa ku Taliya Xeritaanka Wadooyinka Muqdishu, Adigaa Yaabi Doona. Akhriso
Maanta waxaa loo diiday inuu tago xafiiskiisa RW Xukummada M.ne Maxamed Xusen Rooble, waxaa kaloo laga soo celiyay Wasiirka Amniga wadooyinka gala Madaxtooyada Villa Somaaliya. Marka la xakameeyo dhaqdhaqaaqa madaxa xukuumadda iyo wasiirka amniga dalkaas sharci kama shaqeynayo ee xoog ayaa ka shaqeynaya.
Haddaba waxaa la iswaydiinayaa cidda amarta xeritaanka wadooyinka mar haddii aanay Wasaaradda Amniga ahayn ciida amartay oo iyada cidda u xil saaran amaanka guud ahaan. In muddo ah dadku waxay ku wareersanayeen cidda ka danbaysa xeritaanka wadooyinka Muqdishu oo caqabad wayn ku ah dhaqdhaqaaqa shacabka ku nool magaalada Muqdishu.
Saaka waxaa lagu waa bariistay in inta badan wadooyinka soo gala Madaxtooyada lagu daadiyay ciid.
Wadooyinka oo ciid lagu xiraa waa wax ku cusub magaalada, waxaa jiri jiray ciidan taagan bar control iyo dhagax yaalla markii la doono la qaado, laakiin carro-tuur waddada xeraa lama aqoon.
Baaritaan ay MOL samaynay waxaan ku soo ogaanay in aay xaruunta NISA ay joogaan lataliyeyaal u dhashay dalka Ereteriya oo maamulka Farmaajo kala taliye sida loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa shacabka. Lataliyeyaasha Ereteriya ayaa la xaqiijiyay in ay yihiin kuwa ka tala bixiya wadooyinka la xeriyo iyo goorta la xerayo. Taliyayaasha Booliska ee heer federal iyo midka gobolka Banaadir ayaa sheegay in aanay waxba kala socon ciida amarta xeritaanka wadooyinka iyo ciidda lagu daadiyo, taasina waxay caddeyneysaa in Farmajo oo uu damacsan yahay in dalkaan xukun xoog ah ku haysto.
Waxaa muuqata inay fashilmeen oo aysan Somaliy aka shaqeyneyn hababka loo caburiyo shacbiga ee looga dhaqmo dalka Erateriya sida carro-tuurka iyo jid gooyooyinka ay sameeyaan ciidamada caburinta loo isticmaalo.
MOL waxay sheegi jirtay ilaa 2017 in Farmajo ay ugu dambeynta Khasab noqon doonto in talada xoog looga wareejiyo ama uu ku dhinto oo lagu dilo. Maanta 27-Desember-2021 weli waa sidii ama ku dil villada dhexdeeda ama Khasab kaga saar oo kadib maxkamadee ayey joogtaa. Ogaada ma jiro wax xal ah waan waan kasta oo uu Rooble la galaa waxay sii kordhineysaa khasaaraha iyo dhimashada dalka.
Previous articleBeesha Caalamka oo Laba Qodob kasoo saartay Xaalada kacsan ee Madaxtooyada Somaliya
Next article[Deg Deg] Ciidamo ka amar qaata Wasiirka Amniga oo la wareegay xarunta NISA & Gobolka Banaadir
(Documenti) Faahfaahinta jawaab celinta Beyle oo keentay is burin iyo su’aalo...